Inona ary ary amin'ny fomba fiasan'ny Warp Charge 30 an'ny OnePlus 6T? Androidsis
Warp Charge 30: Inona ary ahoana ny fiasan'ny fiampangana haingana an'ny OnePlus 6T
Eder Ferreño | | OnePlus, Tutorials
Tamin'ity herinandro ity ihany ny OnePlus 6T McLaren Edition. Fanontana manokana an'ny marika farany ambony amin'ny marika sinoa miaraka amin'ny McLaren. Ao amin'ity kinova vaovao an'ny fitaovana ity dia ahitantsika andiam-panatsarana, toy ny RAM bebe kokoa na rafitra famenoana haingana haingana, izay efa nolazainay anao taorian'ny fampisehoana azy.
Ity rafitra vaovao ampidirin'ny fitaovana ity dia fiampangana haingana Warp Charge 30. Teknolojia vaovao nampidirin'ny marika izy io. Fa inona marina ity Warp Charge 30 ity? Nanambara ny marika fa namela azy ireo hanome vola ny fahaleovan-tena an-telefaona mandritra ny 20 andro monja.
Tsy misy isalasalana, ity haitao haingam-pandeha hainganana ity fanontana manokana an'ny OnePlus 6T miaraka amin'ny fanatsarana miavaka. Noho io antony io dia hanazava misimisy kokoa momba azy eto ambany izahay, mba hahafantaranao ireo lafin-javatra lehibe momba azy sy ireo lakileny mahatonga azy ho teknolojia manan-danja toy izany.
1 Inona no atao hoe Warp Charge 30
2 Ny charger an'ny OnePlus 6T McLaren Edition
Inona no atao hoe Warp Charge 30
Warp Charge 30 no rafitra famahana haingana haingana izay novolavolain'ilay mpanamboatra sinoa hampiasaina amin'ity OnePlus 6T McLaren Edition ity. Hitanay matetika tsy tapaka ny fomba hamoronana ny marika tsirairay amin'ny rafitra findainy. Nanjary teknolojia manampy amin'ny fanavahana ny marika izy, ho sanda fanampiny. Ary ity no rafitra vaovao atolotry ny OnePlus.
Ny zava-baovao lehibe tonga eto amintsika miaraka amin'ny Warp Charge 30 dia ny famindrana ny hery amin'ny sela iray. Hatramin'izao, ny fahita matetika dia ny famahanana haingana dia teknolojia sela roa, izay manome onja roa mankany amin'ny bateria roa samy hafa, na dia miasa iray aza izy ireo. Fa ny marika kosa dia nanova azy amin'ity tranga ity. Omena enina amps ankehitriny sy herin'ny 30 watt.
Ity dia zavatra iray izay mihoatra ny fahombiazan'ny rafitra fandefasana haingana sela hafa. Satria ny zavatra mahazatra ao amin'izy ireo dia ny ony an'ny hery efatra sy hery 20 watt. Amin'izany fomba izany, noho ny Warp Charge 30, dia mahazo fahaleovan-tena ampy ianao mandritra ny tontolo andro ao anatin'ny fotoana fohy kokoa.
Araka ny nolazain'izy ireo tamin'ny marika sinoa, Mamela ny hanome fizakan-tena an'ity fanontana OnePlus 6T ity ao anatin'ny 20 minitra fotsiny. Raha ny zavatra mahazatra amin'ny maodely hafa dia 30 minitra ilaina ho azy ireo. Amin'ity tranga ity, araka ny marika, amin'ity ora 20 minitra ity, 50% ny batterin'ilay fitaovana dia azo omena vola. Data vitsivitsy izay izy ireo dia efa nokasihina alohan'ny fampisehoana.
Amin'izany heviny izany, ny lakile dia eo am-piandohan'ny dingan'ny famahana. Izy io dia haingana indrindra amin'ity faritra ity, mba hahazoanao angovo bebe kokoa ao anatin'ny minitra vitsy. Na izany aza, ny enta-mavesatry ny OnePlus 6T miaraka amin'ity rafitra ity dia maharitra mitovy amin'ny an'ny maodely hafa ao anatin'ny faritra avo. Maharitra 60 minitra eo ho eo vao vita 100%, raha vakinao hatrany am-boalohany.
Ny charger an'ny OnePlus 6T McLaren Edition
Mba hiasa ity rafitra Warp Charge 30 ity, ilaina ny charger manokana momba an'io. Ary ity no hitantsika ao amin'ny boaty amin'ity fitaovana ity. Izy io dia iray amin'ireo lakilen'ity teknolojia ity izay natolotry ny marika sinoa amin'ity kinova avo lenta ity. Misaotra izay azo atao ny mampiasa azy io.
OnePlus sy McLaren dia nanatevin-daharana an'ity charger ity. Amin'izany fomba izany, amin'ny alàlan'ny fampiasana an'ity haitao ity, nampiditra rafitra fanaparitahana hafanana. Misaotra azy fa mijanona ao amin'ny adaptatera Warp Charge 30 ny hafanana, hafanana kely mahatratra ny telefaona. Io dia mamela ny telefaona hiakatra haingana kokoa. Ary koa io dia handeha amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta, na dia mampiasa telefaona aza isika amin'izany fotoana izany. Zavatra manaitra, satria matetika dia iray amin'ireo zavatra izay mazàna tsy hatao.
Raha fintinina, Ity haitao haingam-pandeha haingam-pandeha ity dia maneho ny fahombiazana ho an'ny mpanamboatra sinoa. Ny marika tsirairay dia manohy miloka irery, na dia vao haingana aza Nahazo fahazoan-dàlana ho anao ny OPPO ho an'ny marika hafa. Ka ho hitantsika ny fandrosoana betsaka amin'ity lafiny ity amin'ny volana ho avy. Saingy miaraka amin'ity Warp Charge 30 ity, ny OnePlus dia manaporofo fa iray amin'ireo mari-pamantarana ao amin'ilay faritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Warp Charge 30: Inona ary ahoana ny fiasan'ny fiampangana haingana an'ny OnePlus 6T
Ady malaza na ahoana no hahafantaranao amin'ny nofonao manokana ny dikan'ny hoe influencer
RPG ady kilasy avo lenta miaraka amin'ny Dragon's Watch